Gịnị bụ homefullness ịchọ mma style | Icho mma
Kedu ihe bụ ụdị ịchọ mma ụlọ zuru oke?
Maria José Roldan | | .Chọ Mma
Ọ bụrụ na enwere ụdị ịchọ mma nke ga-edobe ihe na-ewu ewu ma ga-adị na ejiji n'ime afọ 2022 n'ụlọ ndị Spain. bụ ebe obibi. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụzọ ndụ nke nwere ike ibufe na ịchọ mma nke ụlọ. Ọtụtụ ndị ekpebiela ibi ndụ dị mma dị ka o kwere mee na ebe obibi kwesịrị ịbụ ebe zuru oke iji zuru ike na ịnọkọ ọnụ na ezinụlọ.
N'ụdị a na-achọ mma, ebe dị jụụ na nke dị jụụ na-achịkwa, na-ahọrọ maka ịdị mfe dị mfe na ịdị mfe n'ihe gbasara ihe ịchọ mma dị iche iche. N'isiokwu na-esonụ anyị na-egosi gị ihe ụdị ihe ịchọ mma a gụnyere na njirimara ya.
1 Kedu ihe bụ Obi Ụtọ
2 Àgwàma nke ụdị ịchọ mma ụlọ zuru ezu
3 Ụdị ụlọ zuru oke na-enyere aka inwe ndụ ahụike
Kedu ihe bụ Obi Ụtọ
Obi abụọ adịghị ya na ọrịa na-efe efe emeela ka ọtụtụ ndị malite ịhụ ndụ n'ụzọ dị nnọọ iche karịa otú ha si hụ ya na mbụ. Site n'echiche nke ụlọ, njide emewo ka ndị mmadụ na-ahọrọ ibi n'ụlọ. nke ị nwere ike iku ume ikuku dị jụụ na nke na-anabata ya.
Ya mere, Homefullness ga-abụ ihe ịchọ mma nke ga-achị na nke ga-adị n'ọtụtụ ụlọ n'afọ a. Ọ dị mkpa ịmepụta ụlọ dị mma na nke ọtụtụ udo na obi iru ala na-adaba n'akụkụ niile. Nke a na-achọ mma style a mụrụ si mindfulness ije, nnọọ fashionable na-adịbeghị anya, na-ewere uru nke àgwà ọcha nweta a n'ụlọ ebe ezinụlọ dum nwere ike na-enwe pụrụ iche na-agaghị echefu echefu oge.
Ihe ịchọ mma ụlọ na-achọ n'elu ihe niile iji mepụta ụlọ na-enye ohere ntụrụndụ na ezumike, karịsịa mgbe ogologo ụbọchị ọrụ na ọrụ ezinụlọ gasịrị. Ọ dịghị ihe dị mma karịa inwe ike ịlọta na Kwụsị kpam kpam site na mkpọtu ụbọchị na oke ọrụ.
Àgwàma nke ụdị ịchọ mma ụlọ zuru ezu
Njirimara mbụ nke ụdị ejiji a na-achọ mma bụ usoro na ịdị ọcha. Ụlọ dị mma na ahaziri ahazi bụ ebe ịchọrọ izuike na izu ike. Site n'usoro, anyị na-agbalị ime ka ọnụ ụlọ dị iche iche na-anabata dị ka o kwere mee ma mee ka ọ dị ka itinye oge n'ime ụlọ. Ekwesịrị izere enweghị usoro na ịdị ọcha n'ime ụlọ ebe ọ bụ na ha nwere ike ime ka ịdị n'otu n'ime ya sie ike ibu na
Ihe ọzọ e ji mara nke mma ụlọ zuru oke bụ nke dị mfe ma ghara ịdị mgbagwoju anya mgbe ị na-achọ ụlọ ahụ. Oghere dị mfe ma dị ọkụ na-enyere aka ịmepụta ụlọ dị jụụ na ezigbo mma. N'ime ihe ịchọ mma ahụ, ihe ndị sitere n'okike na textiles dị ka osisi ga-akarịrị. Ị gaghị atụfu ma osisi ime ụlọ ma n'èzí, nke na-enyere aka ịmepụta ụlọ dị mma maka ezinụlọ dum. Osisi na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ụdị ihe ịchọ mma a, ebe ọ bụ na ha na-enyere aka mee ka gburugburu ebe obibi dị ọcha ma na-eku ume dị ukwuu n'ime ya.
Ụdị ụlọ zuru oke na-enyere aka inwe ndụ ahụike
Ọ bụ eziokwu na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ mmadụ na-ebi ụdị ndụ dị elu, Ọ na-emetụta ahụike anụ ahụ na nke mmetụta uche gị nke ọma. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ka ndị mmadụ na-enwe oke nrụgide na nchekasị na-adịghị ejikọta ma ọlị na ibi ndụ ahụike. Ya mere, mgbe ị rutere n'ụlọ ihe ị na-achọ karịa ihe niile bụ ịchọta ebe ị nwere ike ịkwụsị kpamkpam na nsogbu kwa ụbọchị ma zuru ike.
Ụdị ụlọ zuru oke na-enyere aka ịmepụta ọnọdụ dị otú ahụ na bụ na ọ na-akwado oghere ndị dị mfe nke ime ụlọ dị mma na nke izu ike bara uru. Ụlọ obi ụtọ dị mfe iji nweta ekele maka ụdị mma a na ọ dịghị ihe dị mma karịa inwe ike ịnọ n'ụlọ, ma ọ bụ na-ezu ike ma ọ bụ na-ekpori ndụ oge ezinụlọ. Ọrịa ọjọọ ahụ emeela ka ndị mmadụ na-ahọrọ iji oge ha nwere onwe ha na ndị ha hụrụ n'anya n'ebe dị ka ụlọ.
Na nkenke, obi abụọ adịghị ya na ụdị ihe eji achọ mma nke ga-emeri na nke a ga-adị n'ọtụtụ ụlọ bụ Ezinụlọ. Dị ka anyị gwara gị na mbụ, Ụdị ihe ịchọ mma a ga-amụ site na ndụ dị ka Mindfulness. Ọ dị mkpa ịgbapụ site na oghere ma ọ bụ ọnụ ụlọ ndị juputara na oke ibu iji họrọ ịdị mfe na ịdị mfe n'ime ha. Cheta na ụdị ịchọ mma a na-akwado usoro na nhazi mgbe ị na-emepụta ụlọ ebe ị nwere ike izu ike n'enweghị nsogbu ọ bụla. A ghaghị ibi ndụ n'ụzọ zuru ezu na ebe obibi ga-etinyerịrị akụkụ dị mkpa na ndụ ndị mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » .Chọ Mma » Kedu ihe bụ ụdị ịchọ mma ụlọ zuru oke?
Otu esi achọ mbara ihu obere na elongated mma
Kedu ihe na-ewe ihe ọzọ: ákwà mgbochi ma ọ bụ ihe mkpuchi?